ယုဇနကုမ္ပဏီမှ လုပ်အားခများကိုထုပ်ပေးခြင်းမရှိသောကြောင့် လုပ်သမားရာချီ၍ ကုမ္ပဏီမှ စွန့်ခွာ
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁ ကော့သောင်း
ကော့သောင်းမြို့ရှိ ယုဇနဆီအုန်းကုမ္ပဏီတွင် လုပ်အားခများ ပုံမှန်မပေးခြင်း၊
အလုပ်ခေါ်စဉ် စာချုပ်ပါအချက်များအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ကျမ်းမာရေးခံစားခွင့်များ
(၁၄)မိုင်ခန့်သွားရသောယုဇနကုမ္ပဏီသည် ဇုံများခွဲ၍ ဆီအုန်းပင်များစိုက် ပျိုးလျှက်ရှိပြီ်း
ဇုံတစ်ဇုံတွင်အလုပ်သမား(၆၀) ကျော်ရှိပါတယ်၊ estate.a.devision 0.3 ဇုံမ
မြို့နယ်ကပါ ယုဇနကုမ္ပဏီက (၂၀၀၉)
မှသတင်းစာကနေ လက်ထောက်မန်နေဂျာ အဖြစ်အလုပ်ခေါ်တော့ ရွှေဂုံတိုင်မှာရှိတယ့်
ယုဇနကုမ္ပဏီရုးံချုပ်မှာ အတွင်းရေးမူးအစ်မကြီး မစပယ်ထံမှာအင်တာဗျူးပြီး
အဲဒီရာထူးကို လစာ ၂ သိန်းနဲ့ခန့်ခဲ့ပါတယ”်။
ကော့သောင်းသို့ ထွက်လာတဲ့အခြေနေကို ကိုစိုးကပဲ“ ကျွန်တော်တို့ကို ကုမ္ပဏီ ပိုင် ဆီအုန်တင်သင်္ဘောဖြစ် (၃.၁၀.၂၀၁၁)
တွင်အလုပ်သမား (၅၀၀)ကျော်တင်ဆောင်ကာ ကော့သောင်းသို့ ထွက်ခွာပြီး (၅.၁၀.၂၀၁၁) တွင်တော်ဝင်ဆိပ်ကမ်းကို
ရောက်ရှိပါတယ် ဆိပ်ကမ်းကနေ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချပ်ကို မမြင်ရတယ့် တာလပတ်အုပ်ထားတဲ့ ဆယ်ဘီးတပ်
ဆီသီးတင်ကားကြီးတွေနဲ့ ကျွန်တော်အပါဝင် အလုပ်သမား
ကားပေါ်ပါကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူမှ တာလပတ်တွေကိုမဖွင့်ရန် ဖွင်ရင်တော့ နာမယ်လို့ခြိမ်း
ခြောက်ပြီး ခေါ်လာခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ကျွန်တော်အဲဒီကော့သောင်းဆိပ်ကမ်းမှာ
ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ရန်ကုန်မှာ အလုပ်ခေါ်စဉ်က အခြေနေနဲ့ကွာခြားနေသည်ကို
စတင်ခံစားရမိပါတယ် ကော့သောင်းမြို့တော်ဝင် ဆိပ်ကမ်းမှ (၃၈)မိုင် သွားရတယ့် ယုဇနကုမ္ပဏီ ကော့သောင်းရုးံကို လမ်းတွင်
အတက်အဆင်းမရှိ (၁)နာရီခန့် မောင်းနှင်း ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်”
ခတ္တ နေရာချထားပေးပြီး ၄င်းမှ (၇)မိုင်ခန့်ဝေးသော D.2 ခြံ တွင် အလုပ်သမားတန်းရမ်းတွင် နေထိုင်ရကာ ဧက(၁၀၀၀)ရှိသော
လုပ်ကွက်တွင် ရန်ကုန်မှ လက်ထောက်ခြံမန် နေဂျာရာထူးဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့သော်လည်း
လက်တွေ့တွင်ခြံတာဝန်ခံအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ် အလုပ်ချိန်ကို နံနက် (၆.၀၀)
နာရီမှ နံနက်(၁၁.၀၀) နာရီ ၊နေ့လည် (၁.၀၀) နာရီမှ ညနေ(၅.၀၀) နာရီထိ စုစုပေါင်း
(၉.၀၀) နာရီကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်၊ ရန်ကုန်မှ စရိတ်ငြိမ်းဟုအလုပ်ခေါ်စဉ်က ပြောခဲ့သောလည်း
ဒီရောက်တော့ တစ်လ စာအတွက် ဆီ(၅၀) သား၊ ကြက်သွန် (၁၀)သား ငရုတ်သီး(၅)ကျပ်သား ပဲ(၁) ထုတ်
ပေးပေမဲ့ ဘယ်လိုမှလောက် ငှခြင်းမရှိပါဘူး စရိတ်ငြိမ်းဆိုတာ အမည်ခံသက်သက်ပါပဲလို့”
အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ ခံစားခွင့်နဲပက်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏
အပြောနဲ့အလုပ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပုံကို ကိုစိုးက ပြောပါတယ်။
လုပ်သမားတာဝန်ခံတစ်ယောက်ပေါ်မှာ လက်တွေ့ဆက်ဆံကြုံတွေ့ရတာပါ “ ကျွန်တော် တို့
ရန်ကုန်မှာ အလုပ်သွားလျှောက်တော့ ကုမ္ပဏီက လုပ်ခလာစာကို တစ်ဦးလျှင်
(၆၀၀၀၀)ကျပ်နုန်းနဲ့ အနည်း ဆုးံ (၆)လစာချုပ်နဲ့ ကော့သောင်းကိုလိုက်ခဲ့တာပါ
ရန်ကုန်တွင်အလုပ်ခေါ်စဉ် အထက်ပါလစာအပြင် တလကို ဆန် (၁၂)ပြည်ပေးမည်ဟု ဆိုသောလည်း ဆန်တော့ပေးပြီး
ဆန်ဖိုးဖြတ်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ် ကုမ္ပဏီမှ (၆)လ ကျော်လျှင်
အလုပ်သမားစာချုပ်ပါ အချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့” ကိုစိုးနှင့်အတူ
တစ်ဇုံတည်းတွင်လုပ်ကိုင်သူ အခြေခံအလုပ်သမား ဦးအောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တွင်အလုပ်ခေါ်စဉ် လတ်ထောက်မန်နေဂျာအဖြစ် သတင်းစာတွင် ခေါ်ယူစဉ်က
ကုမ္ပဏီအင်တာဗျူးတာဝန်ခံ မစပယ်က ၄င်းရာထူးအတွက် ငွေကျပ်(၂) သိန်းသတ်မှတ်ကာ
လတိုင်းရှင်း စနစ်ဖြစ် ခေါ်ယူခဲ့သော်လည်း ကော့သောင်းခြံတွင် လစာနှင့်ပက်သက်ပြီး
ရန်ကုန်တွင်ပြောသည့်ပုံစံ မဟုတ်တော့ဘဲအ လုပ်ထွက်မှ လစာရှင်းမည်ဟု ကော့သောင်းတာဝန်ခံစီမံကိန်းဒါရိုက်ဆိုသူ
ဦးဇော်လွင်မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် လစာ ကိုရန်ကုန်တွင် အလုပ်ခန့်စဉ်က
(၂)သိန်းကျပ်သတ်မှတ်ခဲ့သောလည်း ကော့သောင်းအရောက်တွင် (၁သိန်း ၂ သောင်း) သာ ပြောင်းလှဲသတ်မှတ်ပေးပြီး
(၃) လကြာလျှင် လစာတိုးမြင့်ပေးမည်ဟု ဆိုသောလည်း မိမိအပြင် မိမိနှင့်ရာထူးတူ
၀န်ထမ်းများလည်း တိုးမြင့်လစာ ခံစားခွင့် မရရှိကြကြောင်း ကိုစိုးက ပြောကြားပါတယ်။
ခေါ်ယူစဉ် ရန်ကုန်၌ ကျမ်းမာရေးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူမည် ဟုဆိုသော်လည်း လုပ်ကွက်မှ
(၂၄) မိုင်ဝေးသော ဆေးရုံတွင် သွားရောက်ကုသခံရန်အတွက် အလွန်ဝေးသော ကြောင့်
အများအားဖြင့် မိမိစရိတ်ဖြင့်သာ လုပ်ကွက်၌ အခကြေးငွေဖြင့် ကုသကြတယ်ဟု
ခြံတာဝန်ခံအဖြစ်လုပ် ကိုင်နေသူ ကိုစိုးမှ ပြောပါတယ် ဒီအခြေနေတွေကြောင့် အလုပ်ခွင်တွင်မပျော်တော့သောကြောင့်
(၆)လပြည့်၍ လုပ်အားခထုတ်ပြီး အလုပ်မှထွက်ကာ သီးခြားခြံတွင်လုပ်ကိုင်ရန်
လစာထုတ်ပေမယ့် မထုတ်ပေးနိုင်ဘူး ကြိုတ်တဲ့ နေရာမှာသွားတိုင်နိုင်တယ် သူဌေးက
အမတ်ဖြစ်တယ် စသဖြင့် ရိုင်းပြအနိုင်ကျင့်ခြင်းခံ ရတယ်လို့ သူတို့(၂) ဦးလုးံက
ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်ကော့သောင်းမြို့ တွင် တခြားဆီအုန်းကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် ရွှေဆီအုန်း၊
ပိုကောင်း၊ စူပါဝမ်း စသောကုမ္ပဏီ များအနက် ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးမြေ
အများဆုးံရရှိသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားအများဆုးံ ကုမ္ပဏီ လည်းဖြစ်ပါတယ်၊အထက်
မြန်မာပြည်မှ လာရောက်လုပ်ကိုင်သောအလုပ်သမားများ ၄င်းကဲ့သို့သောအခက်ခဲများကြောင့်
ခိုကိုးရာမဲ့ ဘ၀ဖြစ် ရေစုံမြောနေသူတွေ အများကြီးပဲလို့ မြို့ခံ ကိုသန်းရွှေမှ
မရှင်းမရှင်း သဘောတူညီချက်(၃)ချက် နဲ့ ဆန္ဒပြသံဃာတော်တွေ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ပြတိုက်အတွင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသော ဦးဇဉ်းငါးပါးနှင့် နိုင်ငံတော်သံဃာနာရယအဖွဲ့ ၊ တိုင်းသံဃာနာရက အဖွဲ့တို့ ညနေ၆နာရီဝန်းကျင်တွင် တွေ့ဆုံညှို့နှိုင်းခဲ့ရာ ဦးဇဉ်းငါးပါးတောင်းဆိုခဲ့သော
အချက်များကို လက်ခံသဘောတူခဲ့သော်လည်း မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ပြတိုက်မှ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
နိုင်ငံတော်သံဃာနာယက အဖွဲ့ရယ် တိုင်းသံဃာနာယက အဖွဲ့ရယ်လာပြီး ကျောင်းထဲဝင်သွားတယ် ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့ဗျာ နောက်အဲ့က ဦးဇဉ်းပြောတယ် သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်သုံးချက်ကို သဘောတူပါတယ် လက်ခံတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့် တရားဟောခွင့်သုံးရက်ပေးမယ်တဲ့ တစ်ရက်ကို တစ်နာရီပေးမယ်ဆိုတာ ရတဲ့အကြောင်းပေါ့” ဟု မန္တလေးမြို့ရှိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သော သံင်္ယာများနှင့် နီးစပ်သော ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဖွဲ့နှင့် တိုင်းသံဃာနာယက အဖွဲ့တို့၏ သဘောတူလက်ခံချက်ကြောင့် မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ဗိမ္မာန်တော်အတွင်းတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြခဲ့သော ဦးဇဉ်းငါးပါးမှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်နှင့် ပြည်တွင်းစစ်ချက်ချင်းရပ်ပေးရန်ဟူသော ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဟော ပြောမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သော သံင်္ယာများနှင့် နီးစပ်သော ဒေသခံများအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ သိရှိရသည်။
၊ တိုင်းသံဃာနာရက အဖွဲ့တို့နှင့် မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်းတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသော ဦးဇဉ်းငါးပါးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းတွင် တရားဟောခွင့် သုံးရက် ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။
မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းကို ညနေ ၆နာရီဝန်းကျင်လောက်ကတည်းက အပြီးပြောင်းခိုင်းတာ အသံချဲ့စက်တွေလည်း ဦးဇဉ်းတွေယူသွားကြတယ် သုံးရက် တရားဟောခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့လေ မနက်ဖြန်ကို နေ့လည် ၁နာရီကနေ ၂နာရီအထိ အဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို တရားဟောမယ်လို့ကြားတယ် သုံးရက်ရတယ်ဆိုတော့ မနက်ဖြန်မှာ စာရွက်တွေကမ်းဖို့လည်း တစ်ချို့လူတွေ ပြင်ဆင်နေကြပြီ “ ဟု ချမ်းအေးသာစံရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
သုံးရက်ပေးခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ သုံးရက်အတွင်း ဖြေရှင်းပေးခြင်း တစ်စုံတစ်ရာမျှ မရှိပါက ဆက်လက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကိုလည်း ယနေ့ညနေအချိန်တွင် အဆိုပါဦးဇဉ်းများမှ ကြေငြာခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
NLD ပါတီကို ၈၉ရာခိုင်နှုန်းက ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်စေလိုကြောင်း လူထုသဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူရာမှာဖော်ပြ
7Day News ဂျာနယ်က သာမန် ပြည်သူ ၁၀၀ ဦးအား အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အင်န် အယ်လ် ဒီ)ပါတီကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်စေ လိုခြင်း၊ မတင်စေလိုခြင်းအပေါ် ယင်းတို့၏ သဘောထားဆနကို ကျပန်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာ ဖြေဆိုသူအားလုံး၏ ၈၉ရာခိုင်နှုန်းက ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်စေလိုကြောင်းဖြေဆိုခဲ့သည်။
မန္တလေး၊ နေပြည် တော်၊ မုံရွာမြို့များ နေထိုင်သူများ နှင့် ပြည်ပနှင့်ကျေးလက်ဒေသ များတွင် နေထိုင်သူစုစုပေါင်း၁၀၀ ဦးကို ကျပန်းလူတွေ့မေးမြန်းခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် အွန်လိုင်းမှတစ် ဆင့် မေးမြန်းခြင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ဖြေဆိုသူများမှာ အလွှာပေါင်းစုံမှ အလုပ်အကိုင်မျိုးစုံ လုပ်ကိုင်နေသူများဖြစ်သည်။ လူ ၁၀၀ တွင် ၈၄ ဦး က အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီကို ပြန် လည်မှတ်ပုံတင်စေလိုသည်ဟု ဖြေ ပြီး၊ ၈ဦးက မှတ်ပုံမတင်စေလို ပါဟုဖြေသည်။ ၃ဦးကမူ မည် သည့်မှတ်ချက်မျှ မပေးပေ။
လူ ၁၀၀ ဦးအားကျပန်းတွေ့ ဆုံမေးမြန်းရာ-
ဖြေဆိုသူများကို ဘာကြောင့်ပါလဲဟု အမေးတွင် ““တရားဝင်ပါတီအနေ နဲ့ လှုပ်ရှားစေချင်လို့ပါ”” ဟု အ သက် ၃၀ နှစ်အရွယ် ဈေးဆိုင်ပိုင် ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် အရောင်းအ၀ယ် နှင့် ဗေဒင်ဆရာလုပ်ကိုင်သူ တစ် ဦးက အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ မှတ် ပုံတင်စေလိုခြင်း၏ အကြောင်း ရင်းကို ““ပူးပေါင်းလုပ်တာ အ ကောင်းဆုံးပါ။ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မ တည့်လို့ ဆူဆူပူပူဖြစ်ရင် နောက် ဆုံးပြည်သူလူထုပဲ ထိတာလေ”” ဟု ဖြေသည်။
၂၄ နှစ်အရွယ် စာ ရင်းကိုင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ““မှတ်ပုံတင်မှသာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားဝင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး အနိုင်ရရှိဖို့ အလားအလာရှိလာလို့ပါ”” ဟု ဖြေသည်။
(စတုတ္ထတန်းအောင် ပညာအရည်အချင်းရှိသော) အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ် အဘွားတစ်ဦးက ““မှတ်ပုံတင်ထားရင် ရွေးကောက်
ကိုယုံကြည်လို့ပါ””ဟု အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော အမျိုးသား တစ်ဦးကဖြေသည်။
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အိုင်တီလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးက ““တင်မှ တရားဝင်ရပ် တည်နိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။ အပြောင်း အလဲတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ မြင်ပါ တယ်”” ဟု ပြောသည်။
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ရှေ့နေတစ်ဦးက ““အင်န်အယ်လ် ဒီပါတီ မှတ်ပုံတင်လိုက်ခြင်းအား ဖြင့် ပါတီတရားဝင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူမှသိရှိလာ၍ ပါတီနှင့်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်အား ယုံကြည် ကြသဖြင့် မိမိတို့၏အမှန်တကယ် ဆနအား ထုတ်ဖော်ရဲကြမည်ဖြစ် ပါသည်”” ဟု ဖြေသည်။
၆၅ နှစ်အရွယ် အထက်တန်းအောင် ဈေးသည်တစ် ဦးက ““လက်ရှိအစိုးရသည်အတိုက် အခံအင်အားစု အလွန်နည်းပါးပါ သည်။ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ ရွေး ကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြင့် ထိုက်သင့် သော အတိုက်အခံအင်အားစုရရှိ လာမည်ထင်ပါသည်။
လက်ရှိ အ စိုးရနှင့်အတိုက်အခံ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှုရှိမှ ပိုမိုကောင်းမွန် သော ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပါသည်”” ဟု ဖြေသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့မှ အသက်၄၆နှစ်အရွယ် ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ““လွှတ်တော်အရပ်ရပ် တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး အမှန်တ ရားများအတွက် ရပ်တည်မှုပေးနိုင် ရန်””ဟု ဖြေသည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ဆယ်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးက အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီမှတ် ပုံတင်စေလိုခြင်း၏အကြောင်းရင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဖြေသည်။
အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီကိုမှတ် ပုံမတင်စေလိုပါဟု ဖြေဆိုသူများ က မှတ်ပုံမတင်စေလိုသော အ ကြောင်းရင်းကို ““ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အားနည်းချက်ရှိသည်ဟု ထင်ပါသည်”” ဟု အသက် ၃၂နှစ် အရွယ် အိုင်တီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သူတစ်ဦးကဖြေပြီး အသက် ၃၄
နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကလည်း ““၀င်ပြိုင်လည်း အလွန်ဆုံးရနိုင်တာ ၀န်ကြီးတစ်နေရာစာ လောက်ပဲ။ ဒီအတိုင်းပဲနေတာက အကောင်းဆုံးပါ””ဟုဖြေသည်။
ပြန် လည်မှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပါက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မယ်လို့ ထင် ပါသလဲ”” ဟု အမေးကို ပါတီပြန် လည် မှတ်ပုံတင်စေလိုသည်ဟု ဖြေဆိုသူများက ““အဘက်ဘက်က ကောင်းမွန်ပြည့်စုံလာမယ်လို့ ထင် ပါတယ်””၊ ““နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံ ရေး၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေး၊ တရား စီရင်ရေး၊ လူမှုရေး အစစအရာရာ တွင် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုရှိမည် ဟု ယုံကြည်၍””၊ ““အများကြီး ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်””၊ ““သိပ် တော့နားမလည်ဘူး၊ဒေါ်စုကို အားကိုးတယ်”” ဟူ၍ ဖြေကြသည်။
အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်ရှေ့ နေက ““အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ မှတ် ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသည် နိုင်ငံတကာ မှ အာရုံပိုမိုစိုက်လာပြီး အာဏာ ပိုင်များဘက်မှ အတတ်နိုင်ဆုံး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ များ ကျင်းပပေးလာနိုင်ကာ ထိုသို့ ကျင်းပခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ဒီမိုက ရေစီရေးရာသည်တိုးတက်စေလာ နိုင်ပါသည်”” ဟု ဖြေသည်။
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် အင်တာနက်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးက ““အနောက်
နိုင်ငံများနဲ့ ဆက်ဆံရေးပိုမို ကောင်းမွန် လာပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်လာ မည်ဟုထင်ပါသည်””ဟုဖြေသည်။
အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီကို ရွေး ကောက်ပွဲဝင်စေလိုပါက လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတို့
မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ပြိုင်စေလိုပါသလဲဟု အမေးကို ၅၅ ဦးက လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်စေလိုသည် ဟုဖြေသည်။ ၂၆ ဦးက ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲတွင်မှယှဉ်ပြိုင်သင့်သည်ဟု ဖြေသည်။ ရှစ်ဦးက မည် သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင် စေလိုသည်ဟု မဖော်ပြဘဲ၊ ရွေး ကောက်ပွဲနှစ်ခုစလုံးတွင် ၀င်ပြိုင် စေလိုသူ ခြောက်ဦးရှိသည်။
လူ ၁၀၀ ကို မေးမြန်းခဲ့သော အဓိကမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်း ဆောင်မှုအပေါ် သင်ယုံကြည်မှု ရှိပါသလား (သို့မဟုတ်)ယုံကြည်မှု မရှိဘူးလား”” ဟု အမေးကို ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ၈၅ဦးက ““ယုံ ကြည်မှုရှိသည်”” ဟုဖြေကြသည်။ သုံးဦးကမူ ““ယုံကြည်မှုမရှိပါ”” ဟု ဖြေပြီး၊ ၁၂ဦးကမူ ထိုအဖြေကိုဖြေ ရန် စောသေးသည်၊ စောင့်ကြည့် လိုသေးသည်ဟုဖြေသည်။
ယုံကြည်သည်ဟု ဖြေသူများ ကို ဘာကြောင့်လဲဟု အမေးတွင် ““ယုံကြည်အားကိုးထိုက်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်
ရဲ့အရည်အချင်းနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ပါ””၊ ““အန်တီစုရဲ့ ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ကို လေးစားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်””၊ ““အများကြီး
နိုင်ငံခြားမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေရင်ရ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိုပြန်လာတယ်။ မိသားစုနဲ့ တကွဲတပြားနေပြီး သူယုံကြည်ရာကို လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်ပါတယ်၊ အားလည်းကိုးပါတယ်”” ဟု ဖြေကြ သည်။
အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် သာသနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက လည်း
““ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို ယုံကြည်ပါတယ်။ သူမဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြီး ရဲရင့် တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တစ်ယောက်မို့
ဟု ဖြေသည်။ အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ် အငြိမ်း စားဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ““ယုံကြည်မှု ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးခေါင်း ဆောင်ကြီးများမှာရှိတဲ့ အရည်အ ချင်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှာရှိလို့ဖြစ်ပါသည်”” ဟု ဖြေသည်။
မုံရွာမြို့မှ အသက် ၂၅နှစ်အ
ရွယ်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ဦးကလည်း ““နိုင်ငံရဲ့ ပြောင်း လဲတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင် မယ့်သူအဖြစ် ယုံကြည်ပါတယ်”” ဟု ဖြေသည်။
ဖြေဆို သူတစ်ဦးက ““ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်သည် ၈၈ အရေးအခင်းမ တိုင်မီ ကာလထိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်မှုတစ်စုံ တစ်ရာမရှိသေး၍ပါ”” ဟု ဖြေ သည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေ အနေမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ပါသလားဟု အမေးကို ဖြေဆိုသူအားလုံး၏ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ဖြေ ပြီး အများစုက အနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲသေးသည်ဟုဆိုသည်။
၁၃ ရာခိုင်နှုန်းက မထင်ဟုဖြေပြီး ၉ ရာခိုင်နှုန်းက မည်သည့်မှတ်ချက် မျှ မပေးပေ။
မှတ်ချက်-လူ၁၀၀ဦးကို ကျပန်းတွေ့ဆုံ မေးမြန်း၍ ရေးသားမှုဖြစ်ပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို လွှမ်းခြုံအောင် လူဦးရေထောင်ချီ၍ မေး
မြန်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း မဟုတ် သည့်အတွက် လူထုတစ်ရပ်လုံး ကိုယ်စားပြု၊မပြု မသေချာသည်ကို သတိချပ်စေလိုပါသည်။
သတင်း---- 7Day News
11/15/2011 08:38:00 PM
အနှိပ်ခန်းမှာရောင်းစားခံထားရတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ၇၀ ကို ထိုင်း ကယ်တယ်
မြန်မာ အမျိုးသမီးများကို ကယ်တယ်ခဲ့တဲ့ အနှိပ်ခန်းရှေ့မြင်ကွင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ Chanthaburi ခရိုင်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အနှိပ်ခန်း တစ်ခုက မြန်မာ အမျိုးသမီး ၇၀ နီးပါးကို ထိုင်း လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့က ကယ်တင်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကယ်တင်လိုက်တဲ့သူတွေထဲက တစ်ဝက်ခန့်ဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် မိန်းကလေးငယ်တွေ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူတို့အားလုံးကို လူမှုဝန်ထမ်းဌာနက စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း အထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ DSI လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာန အကြီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး Komvich Pathanarat က ပြောပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကို ရှာဖို့အတွက် DSI အကြီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး Komvich Pathanarat ကိုယ်တိုင် အနှိပ်ခန်းကို ဧည့်သည်ဟန်ဆောင် သွားရောက် စုံစမ်းခဲ့ပြီးမှ ခရိုင်တရားရုံးက ရှာဖွေဝရမ်းနဲ့ ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာက ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ သစ်ထူးလွင်
11/15/2011 08:18:00 PM
7Day News ဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁၀)၊ အမှတ်(၃၄)မျက်နှာဖုံးမှ “သုံးပေခွဲကျော်ရှိ တောက်တဲ့ တစ်ကောင် ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်ဖြင့်ဝယ်ယူ”သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံကိုဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံမှာ မှားယွင်းနေပြီး၊ သတင်းပါအချက်အလက်အများစု မှားယွင်းခဲ့သည့်အတွက် စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံးကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ကျောက်ဆည်မြို့အခြေစိုက် တောက်တဲ့ဝယ်လက်(အ၀ယ်တော်) တစ်ဦးက ၎င်းင်းကိုတောက်တဲ့ဝယ်ခိုင်းသော မန္တလေးမြို့မှ တောက်တဲ့ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးအား သတင်းပါတောက်တဲ့အကြောင်းကို လိမ်လည်ပြောဆိုရာမှ အဆိုပါသတင်းစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တောက်တဲ့ အ၀ယ်တော်က တကယ်မရှိသော တောက်တဲ့အကြောင်းကို ကုန်သည်သို့ပြောပြီး ယုံကြည်စေရန် အင်တာနက်မှထိုင်းနိုင်ငံရှိ တောက်တဲ့ဓာတ်ပုံကို ကူးယူ၍အရှည် သုံးပေခွဲရှိပြီး၊ အလေးချိန် တစ်ပိဿာ လေးဆယ်ကျပ်သားရှိသည်ဟုဆိုကာ ဈေးမည်မျှပေးမည်ကို မေးသည်။ မန္တလေးမြို့မှ တောက်တဲ့ ကုန်သည်ကလည်း ထိုတောက်တဲ့မှာ တကယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကာ ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းစတင်ဈေးပေးသည်။ ထိုဈေးဖြင့် မရဟု ၀ယ်လက်ကဆိုသောအခါ အောက်တိုဘာ ၃၀ရက်တွင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ငါးသောင်းအထိ ဈေးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ၀ယ်
လက်က တောက်တဲ့မှာ တကယ်မရှိသည့်အတွက် အခြားကုန်သည်တစ်ဦးက ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်ဖြင့် အရောင်း
ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သော မန္တလေးမြို့မှ တောက်တဲ့ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးမှာ 7Day News ကို နှစ်ရှည်လများ သတင်းပေးကူညီခဲ့သော၊ ယုံကြည်ရသည့် သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းက စေတနာဖြင့်ပြောပြသည့်အချက်အလက်များကို ကိုးကား၍ သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသတင်းပါတောက်တဲ့မှာ တောက်တဲ့အ၀ယ်တော်၏ လုပ်ကြံပြောဆိုမှုမှတစ်ဆင့် ကုန်သည်၊ ကုန်သည်မှ တစ်ဆင့် 7Day News ၊ ထိုမှတစ်ဆင့် စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံးထံသို့ အချက်အလက် အမှားများရောက်ရှိခဲ့သည့်အတွက် စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံးကို တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုံးဝသေချာသည်မှာ 7Day News က ထိုသတင်းကို လုပ်ကြံရေးသားထားခြင်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။ သတင်းရင်းမြစ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီး သတင်းဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရစဉ် အမှန်ဟု ယုံကြည်ဖော်ပြမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ရပ်
မှ သတင်းဓာတ်ပုံအစစ် ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးရန်ပေါ့လျော့မှုများနှင့် သတင်းကို ပိုမိုခိုင်မာရန်ကွင်းဆင်း၍ ဘက်ပေါင်းစုံမှ အချက်အ
လက်များ စုစည်းဖော်ပြရန် ပေါ့လျော့ခဲ့မှုတို့အတွက် 7Day News စာဖတ်ပရိသတ်အား တောင်းပန်ပါသည်။
သို့သော် အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် ထိုအလေးချိန်နှင့် ထိုမျှရှိသော တောက်တဲ့ကို မန္တလေးမြို့မှ ကုန်သည်က ပထမအကြိမ် ကျပ်သိန်း
တစ်သောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်ကျပ်သိန်းငါးသောင်း ပေးအပ်ခြင်းမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံးအား သိစေအပ်ပါသည်။
11/15/2011 07:51:00 PM
လောဘအိုကြီးခင်ရွှေ အတွင်းဝန်ရုံး ဟော်တယ်မလုပ်ရလို့ မီဒီယာများကို ရှုံချ
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့် ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ဝန်ကြီးများရုံးအား ဟိုတယ်အဖြစ် ငှားရမ်းမည်ကို ကန့်ကွက် ရေးသားခဲ့ကြသည့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများအား အဆိုးမြင်ရေးသားကြသည်ဟု မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်း အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရွှေမှ ပြစ်တင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယုဇနဂါးဒင်း ဟိုတယ်တွင် အင်္ဂါနေ့က ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းအကြောင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အဖွင့်အမှာစကား၌ ပြည်တွင်း မီဒီယာများသည် ပြည်ပမီဒီယာများကဲ့သို့ပင် မကောင်းသည့်ဘက်မှ ရှု့မြင်ရေးသားကြသည်ဟု ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးခင်ရွှေမှ ပြစ်တင်ပြောသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ ရေးတယ်ဆိုကတည်းက တော်တော်လေးကို စိတ်ဓါတ်ကျဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းတာ မမြင်တဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံတော်က သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်း ကောင်းနေတာကိုလဲ အသိအမှတ်မပြုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်။”ဟု ဦးခင်ရွှေက ပြောသည်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ အမျိုးသား လွှတ်တော်အမတ် တဦးလည်းဖြစ်သည့် ဦးခင်ရွှေက ဝန်ကြီးများ ရုံးကိစ္စအပေါ် ကာကွယ်ပြောဆိုသူများကိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တုန့်ပြန်ပြောဆို သွားခဲ့သေးသည်။
“တချို့ပြောတာလဲ ကြားတယ်။ ဒါကြီးကို အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်မယ်တဲ့။ အသက်ပေးစရာ မလိုပါဘူး တယောက် တသိန်းထည့်ပြီး ဒါကြီးကို ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင် အဲ့လူတွေ ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ အသက်သာ ပေးကြမှာ။” ဟု သူက ဆိုသည်။
“ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေက နုပါတယ်။” ဟု သုံးနှုန်းပြောဆိုခဲ့သည့် ဦးခင်ရွှေက အဆိုပါ ဝန်ကြီးကြီးများရုံးနှင့် ပတ်သက်သည့် မော်နီတာ ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသော “ဘယ်ပေတံနဲ့ တိုင်းမှာလဲ” အမည်ရှိ
ဆောင်းပါး တပုဒ်ကိုမူ ကွဲလွဲသည့် အမြင်ရှိသည်ဟု ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပြီး ယင်းဆောင်းပါးကို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဝေငှခဲ့သည်။
“ ဝန်ကြီးများရုံးသည် အင်္ဂလိပ် အမွေအနှစ်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လပိုင်းသာ ရုံးထိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မြန်မာလူမျိုးများထက် မြန်မာနိုင်ငံအား ကျွန်အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများသာ ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်မှ ထိန်းသိမ်းပါက စာရိတ်များစွာ ကုန်ကျမည် ဖြစ်ကြောင်း” ရေးသား ထားသည်။
ဦးခင်ရွှေက မိမိအနေဖြင့် စင်ကာပူ၊ အမေရိကား စသောနိုင်ငံများတွင် ငွေကုန်ကြေးကျခံ သွားရောက် သုံးဖြုန်းနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားတွင် မီလျံနာဟူသည့် ဂုဏ်ပုဒ်ခံယူပြီး သွားရောက်နေနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသော် လည်း တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်း ပြောသွားသည်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်သည့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းမှာ ခြောက်လအတွင်း ကိုယ်ပိုင်ငွေ ကျပ်သိန်းတသောင်းကျော် အကုန်အကျခံ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
သတင်း--- မျိုးသိဏ်း ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)
11/15/2011 07:37:00 PM
ဆန္ဒပြသံဃာတော်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆရာတော်ဦးသောပါက မှ လူထုကို ဟောပြောနေပုံ (ဗွီဒီယို/ဓါတ်ပုံ)
ဦးဆောင်ဆရာတော်အမည်မှာ (အထက်ပါ Photo & Video ထဲက ဟောပြောသည့် ဆရာတော်အမည်မှာ) ဦးသောပါက ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ဦးသောပါက သည် ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင်ရယူထားပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အတွက် ဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ တို့မှာ လှမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြပွဲများကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်တပါးဖြစ်ပါသည်။ ဗွီဒီယို/ဓါတ်ပုံ -- ညိုကြီး
11/15/2011 07:18:00 PM
ဆန္ဒပြသံဃာတော်တွေနဲ့ အင်တာဗျူး (ရုပ်/သံ)
11/15/2011 06:51:00 PM
မစုစုနွေးကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသည့်ပွဲနဲ့ ငါးမြို့နယ်ကွန်ယက်ရဲ့ လပတ်အစည်းအဝေး (ရုပ်/သံ)
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ မစုစုနွေးကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသည့်ပွဲနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဟံသာဝတိအနောက်ခြမ်း ငါးမြို့နယ်ကွန်ယက်ရဲ့ လပတ်အစည်းအဝေးကို ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မှာ နိုဝင်ဘာ
၁၄ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါ။
11/15/2011 06:17:00 PM
မန္တလေးမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ဆရာတော်ငါးပါးရဲ့ နောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေ
မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးဝင်းအတွင်း မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ဆရာတော်ငါးပါးကို ညနေ ၄း၃၀ မှာ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းမှာ ဆန္ဒပြနေတာ မသင့်တော်ဟု အကြောင်းပြချက်နှင့် ဘုရားကြီးဝင်း ဂေါပကပိုင် ကားနဲ့ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်သို့ ရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ထောက်ခံအားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေလဲ တပါတည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ လိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်။
မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ဟောင်းသို့ ရောက်သောအခါ ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းမရှိဟု ငြင်းဆိုသည့်အတွက် မစိုးရိမ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ သုတ္တန္တကျောင်းမှာ ဆန္ဒပြဆရာတော်ငါးပါးကို ခေတ္တ နေရာချထားပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေက လာရောက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။
တွေ့နေရပြီး မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်က လက်မခံဘူးဆိုတာမျိုးထက် ကျောင်းတိုက်ကို ကြွရောက်လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူက ပျောက်နေပြီး အခုမှ ပြန်ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပြီး အခုဆို အချိန်တော်တော်ကြာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလဲ စောင့်ကြည့်နေတာ အလွန်အမင်းများပြားနေပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲ စောင့်ကြည့်အနေအထားနဲ့ ဝိုင်းရံထားတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ် အယောက် ၃၀၀ နီးပါးကလဲ ကျောင်းဝင်းပြင်ပမှာ ထွက်ခွာမသွားကြဘဲ ထုတ်ပြန်ချက်တခုခု ဆုံးဖြတ်ချက်ကျဖို့အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်လို့ မန္တလေးမြို့ခံတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
အခုလို ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာကို လူထုက ကျေနပ်လက်ခံခဲ့ကြပြီး အများလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အချက်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် အားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ မန္တလေးမြို့ခံက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
11/15/2011 06:05:00 PM
မြစ်ကြီးနား ပေါက်ကွဲမှု အတွက် အိမ်ရှင်ကို ဖမ်းဆီး
တနင်္ဂနွေနေ့ညက မြစ်ကြီးနားမြို့ သီတာရပ်ကွက်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖြစ်သော်လည်း အစိုးရ သတင်းစာတွင် အိမ်ရှင်
ဦးဒယောင် တန်ဂွန်း၏ သားဖြစ်သူကို ဖောက်ခွဲသူ အဖြစ် စွပ်စွဲကာ ဦးဒယောင် တန်ဂွန်းကိုလည်း မိုးညှင်းမြို့တွင် ဖမ်းဆီးထားလိုက်သည်ဟု မြစ်ကြီးနား မြို့ခံများက ပြောသည်။
ယနေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာတွင် အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုတွင် သေဆုံးသွားသူ အိမ်ရှင်၏ သားဖြစ်သူ ဒယောင် ဆိုင်ခွန်က မိုင်းဖောက်ခွဲမှု ပြုလုပ်ပုံကို လက်တွေ့ပြသနေစဉ် ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်ဟု
တနင်္ဂနွေနေ့ညက မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းလျှက်ရှိသည့် နေအိမ်
ဖြစ်ပွားစဉ် မျက်မြင်သက်သေများ ဖြစ်သည့် ယင်းနေအိမ်မှ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ၊
စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များမှာ ဒဏ်ရာရထား၍ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေရဆဲဖြစ်၍ ၎င်းတို့ကို လုံခြုံရေး တင်းကြပ်စွာချထားသည်ဟုလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ တဦးကပြောသည်။
ဆေးရုံမှာ အကျယ်ချုပ်လို ထားထားတယ်။ အပြင်လူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ကန့်သတ် ထားတယ်။ နောက် ရဲတွေကလည်း တယောက်ပြီးတယောက် ခေါ်မေးနေတယ် ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
၁၀ ဦးရှိသည်ဟု အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို ယနေ့ သဂြိုဟ်ပြီးစီး သွားပြီဖြစ်၍ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးဒယောင် တန်ဂွန်းမှာ ၎င်း၏ သားဖြစ်သူ အသုဘအားလိုက်ပို့ခွင့်မရဟုလည်း မြစ်ကြီးနားမြို့ခံများက ပြောသည်။ သေဆုံးသူများထဲတွင် အသက် ၃၀ အရွယ် ၎င်း၏ သားတယောက်ပါဝင်သည်။
တန်ဂွန်း၏ အိမ်နီးနားချင်း တချို့ကမူ မပေါက်ကွဲမီ အိမ်ပေါ်သို့ လက်နက်ကြီး ကျဉ်ဆန် သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစရာ အမြင့်မှ ပျံလာသည့် အသံမျိုးကြားခဲ့ရသည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် ယင်းအချက်ကို သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပေ။
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ညကလည်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၃ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရာ ယင်းပေါက်ကွဲမှုများမှာ လူသွားလူလာကျဲပါးသည့် ညည့်နက်ပိုင်း ဖြစ်သဖြင့် တစုံတရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိခဲ့ပေ။ ယင်း ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက်နေ့ည ယခုပေါက်ကွဲမှုမှာ လူအသေအပျောက် ၁၀ ဦးရှိကာ လူ ၂၀ ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၁ (YPI)
11/15/2011 06:00:00 PM
မြန်မာကို ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အတည်ပြု
ဘာလီ (နိုဆာဒူဝါ)၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) အဖွဲ့ဝင် သက်တမ်း ၁၄ နှစ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများက အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယင်း အစည်းအဝေး အတွင်း ရောက်ရှိနေသော အာဆီယံ အကြီးတန်း အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်း နိုဆာဒူဝါရှိ ဘာလီ နိုဆာဒူဝါ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ကျင်းပလျက် ရှိသော ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ထိုသို့ အတည်ပြု လိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးဘဲ အစည်းအဝေးအပြီး ညနေပိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် လက်ရှိ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီ နာတာလီဂါဝါ၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကြေညာမည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ The Voice Weekly အနေနှင့် သီးခြား အတည်ပြုချက် မရရှိသေးပေ။
အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ထိုသို့ အတည်ပြု လိုက်ပြီးနောက် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များက ထိုကိစ္စကို ထပ်မံ အတည်ပြုရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
" နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေ အတည်ပြု ထားတာကို ပုံမှန်အားဖြင့် ခေါင်းဆောင်တွေ ကန့်ကွက်လေ့ မရှိပါဘူး " ဟု အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ရုံးတွင် ၂ နှစ်ခန့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော ထိုင်း သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
မြန်မာ ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာအတွက် ယခု နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အဆိုပြုခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးများတွင် ယင်းကိစ္စသည် အလေးထား ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မာတီ နာတာလီဂါဝါသည် အောက်တိုဘာ လကုန်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာ၏ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာတွက် အဆင်သင့်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် 'နောက်ပြန် မလှည့်နိုင်သော' ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအသင်းဝင် နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များကို တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ ခရီးစဉ်အပြီး ရန်ကုန် မြို့တော်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းက မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာက အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွင် ကြိုးပမ်းနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်ကြောင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်ရန် တွန်းအား ပေးကြောင်း အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင်ပစ်ဆူဝမ်က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အာဆီယံ နိုင်ငံအချို့မှ သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာသည် သိသာသော လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး ဆိုင်ရာများ တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌနေရာ မပေးသင့် သေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံ ပါလီမန်အမတ်များ အဖွဲ့က တိုက်တွန်းထားသည်။
မြန်မာသည် အာဆီယံကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အလှည့်ကျသော်လည်း ပြည်တွင်းရေး အခြေအနေနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားကြောင့် အလှည့်ကျော်ခဲ့ရသည်။
မြန်မာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာပါက အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ အပြင် ဆွေးနွေးဖက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ ဂျပန် စသည်တို့ ပါဝင်သည့် ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများလည်း လက်ခံကျင်းပရမည် ဖြစ်သည်။
11/15/2011 05:47:00 PM
ဂဒါဖီရဲ့  သားဖြစ်သူ မိုတာဆမ်နဲ့ ချစ်ရည်လူးခဲ့ကြတဲ့ ဥရောပက ဖက်ရှင်မယ်လေးတွေရဲ့  ချစ်ဒုက္ခတွေ (ရုပ်/သံ)
ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးခံ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဂဒါဖီရဲ့  သားဖြစ်သူ မိုတာဆမ်နဲ့ ချစ်ရည်လူးခဲ့ကြတဲ့ ဥရောပက ဖက်ရှင်မယ်လေးတွေရဲ့  ချစ်ဒုက္ခတွေကို ကြည့်ရင်း ဒီတပါတ် အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပေါင်းသင်းပြီး လောကစည်းဇိမ်ခံစားလိုတဲ့ အနုပညာသည်တွေ---အာဏာရှင်မိသားစုတွေဆီက မက်မောစရာကောင်းတဲ့ ဖျော်ဖြေခ
တွေကြောင့် သွားရောက်ဖျော်ဖြေမိခဲတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ နဲ့ ----အာဏာရှင်ဆို
ဘယ်လိုအာဏာရှင်မှ လက်မခံချင်တဲ့ -အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ပိပြားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေဖက်က ရပ်တည်လိုတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအကြောင်း တစေ့တစောင်းတင်ပြလိုတာကြောင့် ဒီအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ တော်လှန်ဂီတ သမားတယောက်လို့ လူသိများတဲ့ ယူတူးတီးဝိုင်းက
ဘိုနိုရဲ့ အနုပညာခံယူချက်တစိတ်တဒေသဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ ဘိုနိုရဲ့  သားပျောက်မိခင်များဆိုတဲ့ တေးသီချင်းကို မိတ်ဆက်လိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့  ဒီတပါတ်အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုမိုးအေး (DVB) တင်ဆက်သည်။
မထသ ( အဝေးပြေး ) ဥက္ကဌကို ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေ
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ကားဂိတ် (ဓါတ်ပုံ-Googleimages)
ရန်ကုန်မြို့တော် အခြေစိုက် အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံ ထိမ်းသိမ်းရေး - မထသ ( အဝေးပြေး ) ဥက္ကဌကို ရဲတပ်ဖွဲ့များ ဒုတိယ ကွပ်ကဲရေး ရဲမှူးကြီး မြင့်စိန် ခေါင်းဆောင်သည့် အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဝင်း ကွပ်ကဲရေး တာဝန်ယူထားသည့် အဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူများက နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ခေါ်ယူစစ်ဆေး မေးမြန်းလျှက် ရှိကြောင်း အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဝင်း ကွပ်ကဲရေး တာဝန်ယူထားသည့် အဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူများ ထံမှ သိရှိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အတွင်းမှ စတင်၍ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဝင်း၊ မထသ (အဝေးပြေး) ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူလာခဲ့သည့် မထသ အဝေးပြေးဥက္ကဌ အပါဝင် အဝေးပြေး(မထသ) မှ ဝန်ထမ်းများ ကိုပါ အဝေးပြေးဝင်း အတွင်းရှိ မြို့တော်စည်ပင်ရုံး အတွင်း ယနေ့ ၃ ရက်မြောက် အဖြစ် ခေါ်ယူ စစ်ဆေးလျှက် ရှိကြောင်းလည်း ၄င်း၏ အဆိုရ သိရှိရသည်။
မထသ အဝေးပြေးမှ တာဝန်ရှိသူများကို စစ်ဆေးနေခြင်းသည် ယာဉ်တစ်စီးလျှင် လက်မှတ် ရောင်းရငွေ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံနေသည့် မထသ ( အဝေးပြေး ) က ဝင်ငွေများကို မည်သို့မည်ပုံ စီမံခန့်ခွဲသည် ဆိုခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်မည်ဟု ထင်မြင် ယူဆကြောင်းလည်း အဝေးပြေး ယာဉ်လိုင်းပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း မထသ သည် ၂၀၁ဝ ခုနှစ်အတွင်း အဝေးပြေး ယာဉ်လိုင်းများအား စက်သုံးဆီ ပံ့ပိုးကူညီရန် မလိုတော့သည့် အချိန်တွင်လည်း ယခင်ကဲ့သို့ အဝေးပြေး ယာဉ်လိုင်းများကို ကောက်ခံလျှက် ရှိနေပြီး ယာဉ်စီးခများကိုလည်း ကန့်သတ် ထားကြောင်း၊ အဝေးပြေး ယာဉ်လိုင်းများကိုလည်း အပေါ်စီးမှ ဆက်ဆံနေမှုကြောင့် မထသ အဝေးပြေးကို ယာဉ်လိုင်း အများစုက ဝေဖန်လျှက် ရှိကြသည်။
ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၁၈ဝ ကျော် ရှိသော အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွင် မထသ အဝေးပြေး လက်အောက်၌ လိုင်းပေါင်း ၁၃ဝ ကျော် ပြေးဆွဲလျှက် ရှိသည်။
သတင်း---The Voice Weekly
11/15/2011 12:04:00 PM
ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ပေးမဲ့ ဗြိတိန် ၀န်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိ
Andrew Mitchell, UK DFID Secretary of State
ဗြိတိန်နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီး Andrew Mitchell သည် မြန်မာ နိုင်ငံကို လေးနှစ်တာ ကာလ အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ပေးအပ်ရန် အတွက် လေ့လာ သုံးသပ်မှု အစီအစဉ် အဖြစ် ၁၄-၁၁-၁၁ ရက်တွင် ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် နံနက် အာရုဏ်တက်ချိန် ၅း၃၀ နာရီခွဲလောက်က စတင်ပြီး မန္တလေးမြို့ ဘုရားကြီးဝင်း မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဗိမာန်တော်ကြီးကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီး အတွင်းမှာ သံဃာတော်တွေ စုဝေးဆန္ဒပြနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး အချက်သုံးချက်ကို ဦးတည် တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလဲ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ဗိမာန်တော်ကြီးကို အတွင်းမှ ပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သံဃာတော် ဘယ်နှပါး အတွင်းမှာ ဆန္ဒပြနေတာကို သတင်းမရရှိသေးပေမဲ့ လက်ကိုင်အသံချဲ့စက်ဟွန်းတွေနဲ့ တောင်းဆိုနေတာကို ကြားသိရပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေက ဆန္ဒပြဘုန်းကြီးတွေကို လာရောက်ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လဲ မန္တလေးမြို့ခံက ဘားမားဗီဂျေကို ပြောဆိုပါတယ်။
အေးမြတ်ထက် (BurmaVJ Media Network)
မန္တလေးမှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့တောင်းဆိုသံ by Aye Myat Htet
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှ ဓါတ်ပုံ
သံဃာတော်တွေ စုဝေးဆန္ဒပြနေတဲ့ မန္တလေးမြို့ ဘုရားကြီးဝင်း မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဗိမာန်တော်ကြီး
11/15/2011 09:23:00 AM
ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်မည်
ရန်ကုန်မြို့၏ ဒဂုံမြို့သစ်လေးမြို့ နယ်နှင့် သာကေတ၊ ဒေါပုံ၊ သန်လျင်၊ သီလ၀ါစက်မှုဇုန်များသို့ တစ်ရက်လျှင် ရေဂါလန် ၄၅ သန်း ပေးဝေမည့် ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းအသစ် တစ်ခုကို အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရေပေးဝေရေးစီမံ ကိန်းကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် စတင်နိုင်ရန်
ခန့်မှန်းထားပြီး လက်ရှိတွင် အကြိုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများကို လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ စီမံကိန်း တည်နေရာမှာ
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် အမှတ် (၇)လမ်းမကြီးနှင့် ငမိုးရိပ်ချောင်း ဆုံရာနေရာတွင် ပြုလုပ်ရန်လျာထားပြီး စီမံကိန်းအား စစ်ပင်တောင် ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းဟု သတ်မှတ် ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ရေရှည်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒဂုံမြို့သစ် လေးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူများ နှင့် စက်မှုဇုန်များ၊ သာကေတ၊ ဒေါ ပုံမြို့နယ်များနှင့် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ခရိုင်ရှိ သန်လျင်၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုး လာနိုင်သည့် အလားအလာများရှိသည့် သီလ၀ါစက်မှုဇုန်များအထိ သောက်သုံးရေ ပြည့်ဝစွာပေးဝေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ စစ်ပင်တောင် စီမံကိန်းမှ ပေးဝေမည့် ရေများမှ ငမိုးရိပ်ဆည်မှ ရေကို ရယူသန့်စင်ကာ ပေးဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းကို စစ်ပင်တောင် ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်းလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စီမံကိန်းကနေ အဓိကအနေနဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကို ရေပေးဝေမယ့် အပြင် သာကေတ၊ ဒေါပုံမြို့နယ်တွေကိုလည်း ရေအားထပ်ဖြည့်ပေးမယ်။ ပြီးတော့ သန်လျင်၊ သီလ၀ါစက်မှုဇုန်အထိ ရေပေးဝေသွားဖို့ လုပ်မှာပါ။
“စီမံကိန်းကို စစ်ပင်တောင် ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စီမံကိန်းကနေ အဓိကအနေနဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကို ရေပေးဝေမယ့်အပြင် သာကေတ၊ ဒေါပုံမြို့နယ်တွေကိုလည်း ရေအား ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်။ ပြီးတော့ သန် လျင်၊
သီလ၀ါစက်မှုဇုန်အထိ ရေပေးဝေသွားဖို့ လုပ်မှာပါ။ လာမယ့် ၂၀၁၂-၁၃ မှာ လုပ်ငန်းစတင်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး
ကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် နှစ်စဉ် လူဦးရေ တိုးပွားလာသည်နှင့်အတူ ရေချိုလိုအပ်ချက်လည်း မြင့်မားလာပြီး ရေအရင်းအမြစ် ရရှိနိုင်မှုမှာလည်း အရေးကြီးလာကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့၏ နေလူထုအတွက် ရေလိုအပ်ချက်မှာ တစ်ရက်လျှင်
ဂါလန်သန်း ၁၈၀ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရေဂါလန်သန်း ၁၆၀ သာ ပေးဝေနိုင်သေးကြောင်း သိရှိရ သည်။ ယင်းလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် ငမိုးရိပ်ရေပေးဝေရေး
စီမံကိန်း ဒုတိယအဆင့်ကို ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စတင် အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိရာ လက်ရှိတွင်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း စီမံကိန်းမှ တစ်ရက်လျှင် ရေဂါလန် ၄၅ သန်း ပေးဝေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့သို့ လက်ရှိရေပေး ဝေနေသော ရေအရင်းအမြစ်များမှာ လှော်ကား၊ ဂျိုးဖြူ၊ ဖူးကြီး၊ ငမိုးရိပ် (အထယု)နှင့် မြေအောက်အ၀ိစီ တွင်းများမှ ပေးဝေနေခြင်းဖြစ်သည်။
11/15/2011 09:09:00 AM
နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်ကနေ ၁၉ ရက်အတွင်းကျင်းပမယ့် (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးမှာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ (၁၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အစည်းအဝေးတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျ သဘာပတိ နေရာယူရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံ အလှည့်ကျ သဘာပတိလုပ်ဖို့
အဆိုပြုခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း မြန်မာအစိုးရသစ်အဖွဲ့ဟာ ဒီမိုကရေစီရေး ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပြလာခဲ့တာမို့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အခုလို ဆုပေးစနစ်မျိုးနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အာဆီယံရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဆူရင်း ပစ်ဆူဝမ်ရဲ့ အမြင်ကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ အာဆီယံ
အဖွဲ့ကြီးရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာတာလို့ အတိုင်းအတာတစ်ခု အနေနဲ့ အာဆီယံက ပြောနိုင်အားရှိတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အာဆီယံက ပံ့ပိုးမှုနဲ့ အားပေးခဲ့သလို တချို့နေရာတွေမှာ ပြောင်းလဲဖို့လိုနေတယ်လို့ ဖိအားတွေလည်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံဟာ မြန်မာအတွက် အရေးပါသလို မြန်မာနိုင်ငံကလည်း အာဆီယံအတွက် သိပ်ကို အရေးပါတာကို မြန်မာနိုင်ငံ အာဆီယံ အလှည့်ကျ သဘာပတိတာဝန်ယူရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကနေ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အဆင့်ဆင့် လုပ်မယ်လို့ ကတိတွေ ပေးခဲ့တာပါ။ မြန်မာ အာဆီယံအလှည့်ကျ သဘာပတိလုပ်ဖို့အတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အမြင် သဘောထားနဲ့ ဘယ်လို စဉ်းစားကြတယ် ဆိုတာကိုလည်း ကြည့်ရဦးမှာဖြစ်ပြီး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာတာတွေ အတွက်ကတော့ အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာတာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။”
မစ္စတာ ဆူရင်းပစ်ဆူဝမ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး ပြောင်းမပြောင်း
အငြင်းပွားစရာမလိုဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆတဲ့အပြင် မြန်မာဘက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကြောင့် စစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာအစိုးရအပေါ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ ချမှတ်ထားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတချို့ပါ လျှော့ချပေးဖို့ ဒီအစည်းအဝေးတွင်း ပြောဆိုမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း မစ္စတာ ဆူရင်းကပြောပါတယ်။
လူကြိုက်များတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ယက် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာရုပ်ပုံ Icon လေးတွေ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရ ၀ါဒဖြန့် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ထည့်သွင်းပေးထားတာကို မြောက်ကိုရီးယား သတင်း
မီဒီယာတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ယွန်ဟပ်ပ်သတင်းဌာနက ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီးယား (Vijay Nambiar) ဟာ မကြာသေးခင်က သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို မနေ့က
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ တံခါးပိတ် အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြ အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာ နမ်ဘီးယားရဲ့ အာရှရေးရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စ ဆုမ်အား (Sohn Ah) ကို ဒေါ်လှလှသန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“ဒီနေ့ ညနေမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ရုံးအရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် လည်းဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီးယားဟာ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ သူ
သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ တံခါးပိတ် အစီရင်ခံခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ကျမတို့အနေနဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဓိက သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အပြီး နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်အားလုံးအကြောင်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ အသေးစိတ်ကို လုံခြုံရေးကောင်စီထံ အစီရင်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အာရှရေးရာဌာန ပြောခွင့်ရ မစ် ဆုမ်အားက ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
11/15/2011 08:55:00 AM
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် တောင်ကုန်း တောင်တန်းပေါများသကဲ့သို့ မြစ်ချောင်းများလည်း ပေါများသည်။အချို့သော မြစ်များသည်ရှည်၏။ အချို့သောမြစ်တို့သည် ကျယ်၏။ အားလုံးသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ အခြားမြစ် တစ်ခုသော်လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက်သော်လည်း ကောင်း စီးဝင်ကြသည်။ ထိုမြစ်တို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် အရေးပါသော မြစ်များပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထင်ရှားသောမြစ်များ ဖြစ်သည့် လေးမြို့မြစ်၊ မယူမြစ်၊ ကုလားတန်မြစ်နှင့် လေးမြို့မြစ်တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော လွင်ပြင်ကို စစ်တွေလွင်ပြင်ဟု ခေါ်သည်။ ထိုမြစ်ကြီးလေးသွယ်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် တစ်ချိန် က အစားဆန်ရေ၊
သား ငါးသယံဇာတ ပေါကြွယ်ခဲ့သည်ဟု သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရှိရသည်။ မြစ်တို့၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများကြောင့် လူသားများစွာ အတွက်အရာအားလုံးမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့သည်ဟု ဆိုရ မည်ဖြစ်ပေသည်။ မြစ်ကိုချစ်ခင်တွယ်တာခဲ့သဖြင့် မြစ်ကလည်း လူသားတို့အပေါ် စေ တနာထားဟန် တူလှသည်။ သို့သော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင် ထိုလူသားများသည် မြစ်များချောင်းများကို အကြင်နာမဲ့စွာ၊ ညှာတာမှု ကင်းမဲ့စွာဖြင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖျက်ဆီးလာခဲ့ကြသည်။ ယင်းအတွက်လည်း မြစ်တို့၏ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံစားနေကြရပြီ ဖြစ်ပေသည်။ လူသားတိုင်း၏ ရင်ထဲတွင် မြစ်များကိုကယ်တင်သင့်ပြီဟု သိလိုက်ချိန်တွင် မြစ်တို့ သည် မျက်ရည်များ ခန်းခြောက်နေချေပြီ။ နောက်ကျသော အသိတရားများကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟု ထင်မိသည်။
ကစ္ဆပနဒီတံတားကို ဖြတ်၍ ကုလားတန်မြစ်ကို မြင်ရပုံ
မောင်တောမြို့နယ်တွင်ရှိပြီး မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသော နယ်စပ်မြစ်ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်ရှိတောင် ကုန်းတောင်တန်း၊ တောနက်ကြီးများမှ မြစ်ဖျားခံစီးဆင်းပြီး မောင်တောမြို့အနီးတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်သည်။ မိုင် ၅၀ခန့် ရှည်လျားသော မြစ်တစ်စင်းဖြစ်ကာ မြစ်ဝပိုင်းတွင် တစ်မိုင်ခွဲခန့်အကျယ်ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ ပြူမချောင်း၊ ငါးခူးရချောင်း၊ ကညင်ချောင်းနှင့် မောင်တောချောင်း ဟူသော ချောင်းကြီးများ စီးဝင်လျက်ရှိသည်။နယ်ခြားမြစ်ဖြစ်သည့်အတွက် အရေးပါသော မြစ်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ သည်။ အနောက်တံခါးပေါက်ကို ကာဆီးထားသော မြစ်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဒေသခံများအတွက် ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသော မြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပေသည်။
မယူမြစ်ကို မေယုမြစ်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့အနီးတွင် ချောင်းကြီးချောင်းပေါင်းများစွာ ပေါင်းဆုံထားသည့် ကုလားပန်ဇင်းချောင်းနှင့် စိုင်းဒင်ချောင်းတို့ ပေါင်းဆုံကာ စီးဆင်းခြင်းဖြစ်ကာ စစ်တွေမြို့ အနီးတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်သည်။ ၈၅
မိုင်ခန့်ရှည်လျားပြီး ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်များကို
ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။ မြစ်ဝပိုင်းတွင် ဒီရေရောက်သော်လည်း မြစ်ဖျားပိုင်းသို့ ဒီရေများ မရောက်သည့်အတွက် ရေချိုသည်။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ သြရမတောင်တန်းမှ မြစ်ဖျားခံ၍ စီးဆင်းလာသောတောဖျား ချောင်းသည် မိုးစီမြစ်နှင့်ပေါင်းဆုံပြီး ကြွီတဲမြစ်အမည်ဖြင့် စီးဆင်းလာကာ စစ်တွေမြို့အနီး၌ မေယုမြစ်သို့ အရှေ့ဘက်မှစီးဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မယူမြစ်၏ လက်တက်တစ်ခုဖြစ်သော စိုင်းဒင်ချောင်းဖျားပိုင်းတွင် အားကောင်းသည့် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သော သဘာဝရေတံခွန်ကြီးကလည်း ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများအတွက် အားထားရာလည်း ဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းများရှိခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း ရှိ မရှိကို လေ့လာကြည့်ရန်လိုဦးမည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့ အသုံးအ၀င်ဆုံး၊ အရေးအပါဆုံးဖြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ်ရှိ လူရှည်တောင်တန်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံချယ် လတိတလန်တောင်ကုန်းများမှ မြစ်ဖျားခံကာ စီးဆင်း လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘွိုင်နု(ဘွေနု)၊ တီမစ်၊ ထရောဘာ (တီအိုရီဗာ) အစရှိသောမြစ်များလည်း မြစ်ဖျားပိုင်းတွင် ကုလားတန်မြစ်ထဲသို့ စီးဝင်နေကြသည်။ အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာတို့၏ နယ်ခြားမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ ချင်းပြည်နယ် ကို ဖြတ်၍ တောင်ဘက်သို့ စီးဆင်းလာခဲ့ပြီး ဖလန်းမြို့၏ အနောက်ဘက်ယွန်း ယွန်းတွင် တီအိုရီဗာမှ အဘွေနုအမည်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ စီးဝင်သည်။ ယင်းဘက်ခြမ်းမှ ဆက်လက်စီးဆင်းလာခဲ့ရာ မြစ်လက်တက်များစွာ စီးဝင်လာခဲ့ပြီး ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့အထက်ပိုင်းတွင် ဘွေနုအမည်မှ ကုလားတန်မြစ်အမည်ဖြင့် တောင်ဘက်သို့ ဆက်လက်စီးဆင်းလာခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ အိန္ဒိယနယ်စပ်မှ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အထိ မိုင်ပေါင်း ၃၀၀ ခန့်ရှည်လျားပြီး စတုရန်းမိုင် ၁၄၀၀ ခန့်သည် ကျယ်ပြန့်သော မြေနုလွင်ပြင်များအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြစ်ကြောင်းများ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့် ဒေသတစ်ခု၏ အလှအပ များသည်လည်း ပျက်စီးသွားကြပေလိမ့်မည်။
လေးမြို့မြစ် လေးမြို့မြစ်သည် အမြင့်ပေ ၅၅၅၀ ခန့်ရှိသည့် ချင်းတောင်တန်းမှ မြစ်ဖျားခံကာ စီးဆင်းလာသော မြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။မင်းပြားမြို့အထိအပိုင်းကို လေးမြို့မြစ်ဟု ခေါ်ဆိုပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ရာမောင်မြစ်အဖြစ် တောင်ဘက်သို့ စီးဆင်းကာ မြေပုံမြို့အနီးတွင်
မင်းကြောင်းချောင်း အမည်ဖြင့် ဆက်လက်စီးဆင်းကာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်သောမြစ်ဖြစ်ရာ သုံးမည်ရမြစ်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်။ မြစ်ဖျားပိုင်းကို လေးမြို့ချောင်း ဟုလည်း တချို့က ခေါ်ဆိုကြသည်။ လေးမြို့မြစ်သည် မြစ်ဖျားပိုင်းတွင် သဘာဝတောင်တောင် အလှအပများရှိသဖြင့် ပြည်ပ ခရီးသွားများ သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ လေညှင်းတောင်ကျေးရွာ အနီးဝန်းကျင်မှစတင်ကာ ရေချိုအပိုင်းဖြစ်သဖြင့် မြစ်ကမ်းဝဲယာတွင် နုန်းတင်မြေနုကျွန်းများဖြစ်ထွန်းရာ ဆောင်းသီးနှံများ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် လေးမြို့မြစ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုများကြောင့် ကမ်းပါးပြိုခြင်းများ နှစ်တိုင်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိရာ မြစ်ကြောင်းပြောင်းလဲမှုများ၊ မြစ်ကြောင်းသောင်ထွန်းမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းအခြားသော မြစ်များစွာရှိသည့်တိုင် စစ်တွေလွင်ပြင်သို့မှ မဟုတ်လှပေ။ ကလိန်တောင်မြစ်၊ ကျောက်ဖြူမြစ်၊ မဒဲမြစ်၊ ပဒေါင်းကွေ့မြစ်နှင့် သံဇိတ်မြစ်တို့မှာလည်း ထင်ရှားသောမြစ်များပင် ဖြစ်ပေသည်။ ကလိန်တောင်မြစ်သည် ရခိုင်ရိုးမတောင်မှ မြစ်ဖျားခံကာ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် ရိုးမတောင်ခြေအကြား မြောက်မှတောင်သို့ စီးဝင်သည်။ အလျားမိုင် ၃၀ ခန့်ရှိပြီး မြစ်ဝတွင် ၁၅ မိုင်ခန့် ကျယ်သည်။ မြစ်ဝတွင် စကုကျွန်းရှိပြီး မာန်အောင်ရေလက်ကြားသို့ စီးဝင်သည်။ ဤမြစ်သို့ မအီချောင်း၊
တန်းလွဲချောင်း၊ လမူး ချောင်းတို့ စီးဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်ဖြူမြစ်မှာ ကျောက်ဖြူ မြို့အနီးမှ ဘင်္ဂလားပင်အော်သို့ စီးဝင်သည်။ ရေလက်ကြားအတွင်းမိုင်း ၂၀ ခန့်ရှည်လျားပြီး အလွန်နက်သော ရေကြောင်းများရှိသည်။ အချို့သောမြစ်များသည် ကျဉ်းမြောင်းသဖြင့် ချောင်း အမည်ဖြင့်သာ ထင်ရှားကြောင်း လည်း သိရှိရပါသည်။ သို့သော်လည်း စစ်တွေလွင်ပြင်သည် မြစ်ကြီးလေးသွယ်ဖြင့်သာ တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် မြစ်ကြီးလေးသွယ်ဟုပင် တင်စားခေါ်ဆိုကြကြောင်း သိရသည်။
မေဃ၀တီ၊ ဒွါရာဝတီ၊ ရမ္မာဝတီ၊ ဓည၀တီဟု ၀တီလေးရပ် ရှိသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုဝတီလေးရပ်သည် ဒေသကြီးလေးခုဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထင်ရှားသောဒေသများ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းများ၊ ခိုင်မာသော သက်သေများစွာတို့ဖြင့် တည်ရှိနေ ခဲ့သော လေးရပ်ဝတီ၌ ဆန်ရေစပါး ပေါများခဲ့သည်။ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ ရခိုင်ဘုရင်မင်းများ အုပ်စိုးခဲ့ရာ ဒေသကြီးများ ဖြစ်သည်ကို မည်သူမျှ ငါတို့ပြည်နယ်ဟု ကြွေးကြော်နေစရာ လိုမည်မထင်။ သမိုင်းကိုဖျက်၍မရနိုင်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှတ်တိုင်များတွင်လည်း အထင်အရှားရှိခဲ့သည်သာ။ ထိုအချက်များသည်ပင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ အစစ်အမှန် မည်သူဖြစ်မည်ကို ဖော်ပြနေပြီဖြစ်သည်။ ခေတ်ကြီးလေးခေတ်ဖြစ်သော ဓည၀တီ၊ ဝေသာလီ၊ လေးမြို့၊ မြောက်ဦးခေတ်အဆက်ဆက် ဘုရင်မင်းများစွာ စိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြ သည်။ ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်လိုကြသောဘုရင်များခေတ်က တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြသော ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးများစွာ မျက်မှောက်ကာလ၌ပင် တွေ့မြင်နိုင်သေးသည်။ ယာရှင်ကိုမျောက်နှင်သောအဖြစ်ကို မည်သူမျှ လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိသာလှပေသည်။
မာန်အောင်ကျွန်းကို မေဃ၀တီ ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ဒွါရာဝတီဆိုသည်မှာ သံတွဲမြို့နယ်ကို ခေါ်ဆိုသည်။ ရမ္မာဝတီဆိုသည်မှာ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် ကျောက်ဖြူကျွန်းကို ခေါ်ဆိုပြီး ဓည၀တီဆိုသည်မှာ မြောက်ဦးနှင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ မြို့များစွာပါဝင်သော ဒေသကိုခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် ခရိုင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကြသူများပီပီ ယခုတိုင်နန်းရာများ၊ မြို့ရိုးများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဘာသာစကားများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပြောဆိုနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ၀တီလေးရပ်သည် ထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့သော ဒေသကြီးများဖြစ်ခဲ့သည်။ကာလရှည်ကြာစွာ ဘုရင်များအုပ်စိုးခဲ့သော ဒေသများဖြစ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများရှိခဲ့သဖြင့် ယနေ့တိုင် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထွန်းကားနေဆဲဖြစ်သဖြင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြစ်ကြီးလေးသွယ်နှင့် ၀တီလေးရပ်တို့သည် ရခိုင်ပြည်သမိုင်းတွင် အထင်အရှားရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်းအရာများစွာကို ပြန်ကြည့်လျှင် ကောင်းခြင်းနှင့် ဆိုးခြင်းများစွာတို့ဖြစ်တည်လာမည်မှာ မုချလွဲဖြစ်ပေသည် . . . ယင်းအတွက် မြစ်ကြီးလေးသွယ်နှင့် ၀တီလေးရပ်တို့သည် ရခိုင်ပြည်သမိုင်းတွင်
အထင်အရှားရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြောင်းအရာများစွာကို ပြန်ကြည့်လျှင် ကောင်းခြင်းနှင့်ဆိုးခြင်းများစွာတို့ ဖြစ် တည်လာမည်မှာ မုချလွဲဖြစ်ပေသည်။ မြစ်ကြောင်းတူးဖော်ခြင်းများ၊ မြစ်ကြောင်းများအတွင်း တာတမံများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆည်များတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လာကြသည်ကို တွေ့လာရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မြစ်ကြောင်းများကိုအခြေခံကာ စီးပွားဖြစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၀၁ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းကာလများတွင် ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာသဖြင့် ရေကြောင်း လမ်းများသည် မှေးမှိန်သလောက် ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ ကားလမ်းများသည် နှစ်ကာလကြာမြင့်လာသောအခါတွင် ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သဖြင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ တစ်ကျော့ပြန်တိုး တက်လာခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
မြစ်ကြီးလေးသွယ်အတွင်းနေထိုင်ကြသော ၀တီလေးရပ်မှ လူငယ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာတို့သည် လိုအပ်ခြင်းမလိုအပ်ခြင်းများဖြင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရသော လူမှုဘ၀ကို တွေးတောကြည့်မြင်ရန် လိုအပ်လှပေ သည်။ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ကမ်းလွန်ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ မြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းများ၊ ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှုများ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမှုများ၊ ကုန်းတွင်းရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေတူး ဖော်ခြင်းများအစရှိသော လုပ်ငန်းများစွာကို မြင်နေ ကြားနေရသည်။
မြစ်ကြီးလေးသွယ်ထဲက စီမံကိန်းများကို ပြန်ကြည့်လျှင်လည်း အကောင်းအဆိုးများစွာဖြစ်လာမည်ကို တွေးမြင်နေကြရပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အကောင်းအဆိုးတွင် အကောင်းဘက်က ဖြစ်ဖို့များသလား၊ အကောင်းဘက် ကများသလားဆိုသည်ကိုလည်း မြင်တတ်ရန်လိုသည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် မြစ်ကြီးများသည် အစဉ်အလာမပျက် စီးဆင်းနေသော်လည်း နောက်နေ့မနက်တွင် ထိုမြစ်များသည် စီးဆင်းခြင်း အရှိန်အဟုန် ကောင်းနိုင် ပါဦးမလားဆိုသည်ကို တွေးတောရန် လိုအပ်လှမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ... ။ ။
Written by သန်းလှိုင် (စစ်တွေ) သစ်ထူးလွင်
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဂျာနယ်အတော်များများမှာ စာမရေးဖြစ်ဘူး။ စောင့်ဖတ်တဲ့ပရိသတ်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ရာသီက ပူပြင်းလွန်းလို့ မနည်းကြီးတောင့်ခံနေရတဲ့ အထဲခေါင်းပူစရာတွေလည်း ခါတိုင်းထက်ပိုများသွားလို့ပါ။ ဆွေမျိုးထက်ခင်လို့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွှတ်လိုက်တဲ့ထဲပါလာတဲ့
လူငယ်တွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ခန္တီးက၊ ကလေးက၊သရက်က၊ သာယာဝတီက၊ အင်းစိန်က နေရာစုံကပါပဲ။ တစ်ခါမှမြင်ဖူးတွေ့ဖူးကြတာမဟုတ်ပေမယ့် ဆွေမျိုးတွေထက်တောင် ခင်ကြလို့ 'တကူးတက' လာပြီး နှုတ်ဆက်ရှာကြတာဖြစ်လို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုရတယ်။ ဆွေမျိုးထက်တောင်ခင်ကြလို့ဆိုတာ အပိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ခမျာများ ထောင်ကလွတ်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာတောင်မပြန်ကြသေးဘဲ ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်။
ကြုံဖူးမှသိဒီသံယောဇဉ်မျိုးက 'ပြောမယုံကြုံဖူးမှသိ' ဆိုသလို တော်ရုံနဲ့ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ကြုံဖူးသူများသာ သိနိုင်ကြတာမျိုးဖြစ်တယ်။ လူငယ်အားလုံးက ခုမှတွေ့ဖူးကြတာဖြစ်ပေမယ့် စိမ်းမနေဘူး။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မိတ်ဆက် ပြီးတာနဲ့ သူတို့ရင်ထဲပါလာတဲ့စကားတွေကို အားရပါးရ ရင်ဖွင့်ပြောကြတော့တာပဲ။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် ပြောချင်တာအားလုံး မခြွင်းမချန်ပြောကြတယ်။ မရှင်းတာတွေကို မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်။ သဘောမတူတာရှိရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်။ မျိုးဆက်ကွာဟမှုကို သူတို့သတိမထားမိဘူး။ သူတို့နဲ့ တစ်ခရီးတည်းသွားနေတဲ့ ဘ၀တူခရီးဖော်တစ်ဦးအဖြစ်ပဲ မြင်ကြတယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟုတ်တာပေါ့။
ပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းကို ဦးတည်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အားခဲသွားနေကြတဲ့ ခရီးသည်ချင်းပဲလေ။ ကိုယ်ကစောပြီးမွေးလို့ အရင်သွားခဲ့တာပဲရှိတယ်။ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ ဘာမှမကွဲပြားပါဘူး။ကိုယ်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ ရတဲ့ ဆူးငြောင့်ခလုတ်ကသင်းတွေကို သူတို့လည်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ကျခဲ့တဲ့ ချောက်ကမ်းပါးကြီးတွေထဲ သူတို့လည်းကျခဲ့ရတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှေ့ကစောထွက်ခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်အထိပန်းတိုင်ရှိရာကို ကိုယ်က ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ချီတက်နေဆဲဖြစ်သလို သူတို့လည်း ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ချီတက်နေဆဲပဲဖြစ်တယ်။ ဘ၀တူတွေ၊ ခရီးသွားဖော်တွေပဲပေါ့။ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်း ဖြစ်ကြတယ်။ ရဲဘော် တွေကြားမှာ အသက်ကွာခြားချက်ဆိုတာမရှိဘူး။ အထက်နဲ့အောက်ဆိုတာမရှိဘူး။ အားလုံးအတူတူပဲ။ခလုတ်မထိ၊ ဆူးမငြိပါစေနဲ့
ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ လူငယ်တွေအားလုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေအကြောင်း ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး စာဖွဲ့ပြောဆိုမနေကြတာဖြစ်တယ်။ အရင်ဆုံး သူတို့ပြော တာက ကျန်နေရစ်ခဲ့သူတွေအကြောင်း ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ တိုင်းရေးပြည်ရေးပေါက်နဲ့ ကျေးတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့တစ်တွေထဲမှာ အဖေဆုံးသွားတာ မသိလိုက်သူပါသလို အမေကို ဒီတစ်သက်အမေလို့ ခေါ်ခွင့်မရတော့သူလည်း ပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးစလုံး ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ဒီကိစ္စတွေကို နာနာကြည်းကြည်း ပြောမနေကြဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ပဲ စိတ်မအေးနိုင်အောင် ဖြစ်နေ ကြတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးခလုတ်မထိ ဆူးမငြိပါစေနဲ့လို့ ရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ကြောက်လာတယ်အဲဒီလိုနဲ့ပဲ
သူတို့အပူတွေက ကိုယ့်အပူတွေဖြစ်လာပြီး ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားရတယ်။ သူတို့အားလုံး ကိုယ့်အပေါ်မှာထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က သိပ်ကြီးမားလွန်းတော့ ကြောက်လာတယ်။ စကားကို ပေါ့ပေါ့လွယ်လွယ် ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားရတယ်။ခါတိုင်းလိုလူငယ်လေးတွေ သူတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပညာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေလာရောက် ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်တာမျိုးဆို ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဆိုနိုင်သေးတယ်။ မှားသွားလည်း ကာယကံရှင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ပဲ နစ်နာမှာ။ ဒါတောင်တကယ်တော့ မမှားသင့်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယုံကြည်အားကိုးလို့ လာတာမဟုတ်လား။ အခုကိစ္စကျတော့ လူငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရေး ပြည်ရာဖြစ်တယ်။ မှားသွားရင် သံဃာစင်ပါမှောက်တဲ့ကိန်း ဆိုက်သွားနိုင်တယ်။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို စတင်လျှောက်လှမ်းနေပြီလို့ ဆိုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်။ အမြန်ဆုံးဆိုချင်ပါတယ်။
ကြာကြာစောင့် မနေရဖို့ဘဲ မျော်လင့်ပါတယ် . . .
ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောပြီး အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို စတင်လျှောက်လှမ်းနေပြီလို့ ဆိုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်။ အမြန်ဆုံးဆိုချင်ပါတယ်။ကြာကြာစောင့် မနေရဖို့ဘဲ မျော်လင့်ပါတယ် . .
လမ်းကြောင်းချော်ထွက်နိုင်အထူးသဖြင့် မီဒီယာတွေ သိပ်အားကောင်းတဲ့ခေတ်မှာ နည်းနည်းလေးမှ အမှားခံလို့မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်က သတင်းမီဒီယာသမားဖြစ်တော့ ပိုပြီးသတိထားနေရတယ်။စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကို လူရိုသေ ရှင်ရိုသေဖြစ်အောင် မနည်းကြီးကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ကြလို့ အခုမှ အသိအမှတ်ပြုခံရကာစပဲ ရှိသေးတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ သတင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း သိက္ခာသမာဓိရှိရုံတင်မက တာဝန်သိစိတ်ပါ ရှိကြရမှာပါ။နိုင်ငံရေးသမားတွေ စကားတစ်ခွန်းမှားရင် သမိုင်းလမ်းကြောင်းချော်ထွက်သွားနိုင်သလို သတင်းသမားတွေစာတစ်ကြောင်းအရေးမှားရင်လည်း အားလုံးပွက်လောရိုက်ပြီး သမိုင်းလမ်းကြောင်း နောက်ပြန်လှည့် သွားနိုင်ပါတယ်။ကစားဝိုင်းမဟုတ်အဲဒါကြောင့်
စကားမပြောခင် အထပ်ထပ်ချိန်ဆရတယ်။ မှားသွားရင် ကိုယ့်စကားကိုယ်တာဝန်ယူတယ်လို့ ပြောရုံနဲ့မရဘူး။ မှားသွားရင် ခံရမှာက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း၊ သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။အားလုံး ခံကြရမှာ။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးရဲ့ကံကြမ္မာကို လောင်းကစားဝိုင်းမှာ တစ်ကွက်တည်းပုံအောပြီး
ထိုးသလိုမျိုးလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးဆိုတာက ကစားဝိုင်းမဟုတ်ဘူး။ ညကမက်တဲ့အိပ်မက်ကို ယုံကြည်ပြီး စွန့်စားတာမျိုး မလုပ်ရဘူး။ အထပ်ထပ်အခါခါ စဉ်းစားတွက်ချက်ပြီး လုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်။အချိန်သင့်၊ မသင့်
ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေ ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်က သိပ်ကြီးမားလွန်းလို့ ကြောက်လာတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ လူငယ်တွေသာမကဘူး လူကြီးပိုင်းကလည်း ဖုန်းဆက်ပြီး အားပေးကြ၊ ထောက်ခံကြတယ်။ တချို့က ရင်ဖွင့်ကြတယ်။ ဒီယုံကြည်ကိုးစားမှုမျိုးတွေကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်မှာလဲ။ ဒီလိုတန်ဖိုးထားတော့ စကားကို ပြီးလွယ်စီးလွယ် မပြောဝံ့ဘူး။ အထပ်ထပ်စဉ်းစားရတယ်။ ပြောသင့်တဲ့စကားမှန်ပေမယ့် အချိန်အားဖြင့် သင့် မသင့်ချင့်ချိန်ရတယ်၊ ကိုယ်တစ်ဦးတည်းအရေးမဟုတ်တဲ့အတွက် ဆံခြည်တစ်မျှင်စာလေးတောင် အမှားခံလို့မဖြစ်ဘူး။တက်သမျှဆန့်ကျင်ခဲ့
နောက်ဆုံးကျတော့ ဧရာဝတီမျက်နှာကိုထောက်ပြီး အခုချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်ဘဲ အချိန်ပေးစောင့်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း ဘယ်တုန်းကမှ မကြားဖူးတဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားသော အားဖြင့် မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို ဆက်မလုပ်ဘဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကြေညာချက်ကို ကြိုဆိုအသိအမှတ်ပြုပြီး
တူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုး ပေးသင့်တယ်။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်လုံးလုံး ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတက်သမျှ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။
မျှော်လင့်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံး အခြေခံဥပဒေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း အသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူး။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုလည်း ခုအချိန်ထိ မထောက်ခံသေးဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်၊မဖော်ဆိုတာ မသိနိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဧရာဝတီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရမျိုးရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ဖြစ်တယ်။ နောက်ဝန်ကြီးများရုံးကို ဟိုတယ်ဖွင့်ဖို့မငှားတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစား လိုက်နာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ အရိပ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့မအပ်စပ်တဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရသူတွေကိစ္စနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကိစ္စကိုသာ ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီး အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို စတင်လျှောက်လှမ်းနေပြီလို့ ဆိုနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်။အမြန်ဆုံး ဆိုချင်ပါတယ်။
Written by လူထုစိန်ဝင်း သစ်ထူးလွင်
11/15/2011 08:44:00 AM
အစိုးရသစ်၏ လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်အမိန့်ဖြင့် မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နာမည်ကျော် အင်းစိန်ထောင်ကြီးမှ လွတ်မြောက်လာသော အကျဉ်းသားများ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်စွဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရဲ့
သမ္မတထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် မျှော်လင့်တကြီး သွားစောင့်ခဲ့ကြတာပါ။
ရန်ကုန် အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှာ ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ အကျဉ်းကျခဲ့သူ ၁၀ ဦးနီးပါ ရက်စေ့လို့ ဒီကနေ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အရ ပြန်လွတ်လာသူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးလို့ အကျဉ်းထောင်ရှေ့ တစ်နေကုန် သွားစောင့်နေခဲ့တဲ့ အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်တစ်ဦးက အာရ်အက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလတုန်း ကတော့ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က သမ္မတထံ မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ အိတ်ဖွင့်စာပေးပြီး နောက်တစ်ရက်မှာပဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် အမိန့်အရ အကျဉ်းသား ၆၃၀၀ ကျော် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလိုမျှော်လင့်ရင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်လာမလား ဆိုပြီး ဒီကနေ့ မနက်က မန္တလေး အိုးဘို အကျဉ်းထောင်မှာ သွားစောင့်နေခဲ့တဲ့ မန္တလေးတိုင်း အင်န်အယ်လ်ဒီ စည်းအဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးနိုင်ကလည်း ထောင်နားဝန်းကျင် မေးမြန်းကြည့်တော့ ဒီနေ့ လွှတ်မဲ့အစီအစဉ် မရှိဘူး ဆိုလို့ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
ရန်ကုန် နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် မတိုင်ခင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး မိသားစုတွေက မျှော်လင့်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
11/15/2011 08:12:00 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရာထူးကြီးတခုယူဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကမ်းလှမ်း
Al Jazeera။ ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရာထူးကြီးတခုခု ယူဖို့ သမ္မဦးသိန်းစိန်က ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အကြောင်း Al Jazeera ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဌာနက ယမန်နေ့က လွှင့်ထုတ်သွားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရာထူးကြီးတခုခု ယူဖို့ အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အကြောင်း အဖွဲ့ချုပ် အရာရှိတဦးက Al Jazeera ရုပ်မြင်သံကြားဌာနကို ပြောတယ်လို့ Al Jazeera သတင်းထောက် Wayne Hay က ချင်းမိုင်မြို့ကနေ သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုရာထူးမျိုးကို သမ္မတ ဥိးသိန်းစိန်က ကမ်းလှမ်းထားသလဲဆိုတာကိုတော့ သတင်းထောက်က တိတိကျကျ ပြောမသွားပါဘူး။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပဒေအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမြင့်ဆုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူးထက်ပိုပီး အစိုးရက ကမ်းလှမ်းနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ အာအက်အေ မြန်မာပိုင်း ရေဒီယိုကနေ မကြာခင်က ပြောသွားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရာထူးတခုခု လက်ခံမယ်ဆိုရင် အခြေခံဥပဒေအရ ပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူခွင့်ရှိမှာမဟုတ်သလို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကလဲ နှုတ်ထွက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
11/14/2011 07:47:00 PM
Suu Kyi reflects on past year (Video)
11/14/2011 07:43:00 PM
Bomb kills 10, wounds 27 in northern Myanmar
Photo (Yangon PressInternational)
(Reuters) - At least 10 people were killed and 27 wounded fromabomb blast in the capital of Myanmar's northern Kachin State bordering China, local sources said on Monday.
The blast took place late evening Sunday in the city of Myitkyinar and causedablaze at three houses. Those killed included nine orphaned students andachild, local residents told Reuters.
"A study group was taking place at the time of the bombing, that was why the number of casualties was high,"aresident told Reuters, requesting anonymity.
It was not immediately known why the orphan homes were targeted, or who was behind the bombing.
official newspapers did not report the incident, but saidabomb went off and another was defused in Myitkyinar Saturday, and there were no injuries.
Kachin state is one of Myanmar's most dangerous regions, plagued by decades of conflict between
ethnic separatists and government troops.
11/14/2011 07:39:00 PM
ပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေသော မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တနင်္ဂနွေနေ့ညက မိဘမဲ့ ကလေးမျာအား စောင့်ရှောက်နေသည့် နေအိမ်တခုထဲသို့ အပြင်မှ ဗုံး ပစ်သွင်းဖောက်ခွဲမှုကြောင့် လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးကာ ၂၇ ဦး ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်ရရှိသွားသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။မြစ်ကြီးနားမြို့
သီတာရပ်ကွက် AG ဘုရားကျောင်းအနီးရှိ ဦးဒယောင်တန်ဂွန်း၏ နေအိမ်တွင်းသို့ ဆိုင်ကယ် စီးနင်းလာသည့် လူနှစ်ယောက်က အထုပ်တထုပ် ပစ်သွင်းသွားရာမှ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကြောင့် ဦးဒယောင်တန်ဂွန်း၏သား ဆယ်နှစ်ကျော်အရွယ် မောင်ဆိုင်းခွမ်၊ သမီး တဦးနှင့် တနှစ်အရွယ် မြေးတဦးတို့ အပါအဝင် ၁၀ ဦး သေဆုံးသွားသည်။“ဦးဒယောင်တန်ဂွန်းရဲ့ကလေးတွေ
နေတဲ့အိမ်က အနောက်ဘက်မှာ လမ်းကြားရှိတယ်။ အဲဒီလမ်းကြားဘက် ကနေ ဗုံးပစ်လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့လူနှစ်ယောက် အဲဒီခြံဝင်းထဲကို အထုပ်တခု လာပို့ပေးထားတယ်။ သူတို့ထွက်ပြီးနောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပေါက်ကွဲသံ ထွက်လာတယ်လို့လည်း ပြောနေကြတယ်။” ဟု အိမ်နီးနားချင်း တဦးက ပြောသည်။
သီတာရပ်ကွက်ရှိ မိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးအိမ်သို့ တနင်္ဂနွေညက နေအိမ်ပြင်ပမှ ဗုံးပစ်သွင်းခံရပြီးနောက် နေအိမ်သုံးလုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားသွားခဲ့သည်။ ဗုံးကြောင့် လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး ၂၇ ဦး ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံ-Hkra U/ မဇ္ဈိမ ဦးဒယောင်တန်ဂွန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ သိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ဝင် တဦးဖြစ်ကာ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် ခရီးလွန်နေသည်။ သူ၏နေအိမ်တွင် သိုင်းလာသင်နေသော သင်တန်းသားများ တည်းခိုနေပြီး၊ မိဘမဲ့နှင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ထားရာ လူဦးရေ ၃၀ ကျော်နေထိုင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။“ကျနော်အခု
ရင်ခွဲရုံမှာ သွားကြည့်နေတယ်။ အခုထိ သေတာ ၁၀ (ယောက်) ရှိတယ်။ ဂူသွင်းဖို့ လုပ်နေတယ်။ ဒဏ်ရာရအားလုံးက ၂၇ ဦးရှိတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း ဒဏ်ရာပြင်းတယ်။ အရေးပေါ်ခန်းမှာ ခွဲစိတ်ကုသနေ တယ်။”ဟု ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။လူနာများ
ကုသမှုခံယူနေသည့် မြစ်ကြီးနားမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း တနင်္ဂလာနေ့ နံနက် ၇ နာရီက သွားရောက် ကြည့်ရှု့ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုမှ မီးလောင်ကျွမ်းရာ ဦးဒယောင်တန်ဂွန်း၏ နေအိမ် အပါအဝင် အိမ်သုံးလုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံး သွားသည်။ အနီးရှိ အိမ်တလုံးမှာ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီများ သိုလှောင်ထားရာက မီးကူးစက်သွားခြဲ့ခင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။သေဆုံးသွားသူများ၏ နာရေးကို Jade Land Company ပိုင်ရှင် ဦးရွပ်ဇော်ခေါင် အပါအဝင် ဒေသခံများက စီစဉ်ပေးလျက် ရှိသည်။
သီတာရပ်ကွက်ရှိ မိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးအိမ်သို့ တနင်္ဂနွေညက နေအိမ်ပြင်ပမှ ဗုံးပစ်သွင်းခံရပြီးနောက် နေအိမ်သုံးလုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားသွားခဲ့သည်။ ဗုံးကြောင့် လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး ၂၇ ဦး ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံ-Hkra U/ မဇ္ဈိမ ဗုံးခွဲသည့် လက်သည်ကို မြို့ခံများ မှန်းဆနိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ဖြစ်နေပြီး စနေနေ့ ည ၁၀
နာရီမှ ၁၁ နာရီခွဲအတွင်း ဗုံးလေးလုံး ဆက်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်အတူ ရဲများ လမ်းပေါ်တွင် စစ်ဆေးမှုများလည်း ရှိနေသဖြင့် ည
၇ နာရီကျော်သည်နှင့် မြို့ပေါ်တွင် လူခြေတိတ်ဆိတ်လျက် ရှိသည်။ဗုံးပေါက်ကွဲသံများကို မကြာခဏ ကြားနေခဲ့ရသော်လည်း အများအားဖြင့် လူသူကင်းဝေသော နေရာများတွင်သာဖြစ်ပွားလေ့ရှိသဖြင့် ယခင်ရက်များက “ခြိမ်းခြောက်ရုံသာ” ဖောက်ခွဲခြင်းဟု အများစုက ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။အစိုးရအာဘော်
တနင်္လာနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် “ မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ချိန်ကိုက်မိုင်းတလုံးကို အချိန်မီ ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး အခြားမိုင်းနှစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့သည်" ဟု ရေးသားထားသည်။
သီတာရပ်ကွက်ရှိ မိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးအိမ်သို့ တနင်္ဂနွေညက နေအိမ်ပြင်ပမှ ဗုံးပစ်သွင်းခံရပြီးနောက် နေအိမ်သုံးလုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားသွားခဲ့သည်။ ဗုံးကြောင့် လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး ၂၇ ဦး ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံ-Hkra U/ မဇ္ဈိမ ည ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ်ခန့်တွင် သီတာရပ်ကွက် အား/ကာ ရုံးရှေ့လမ်းနှင့် ပေ ၄၀ ခန့်အကွာရှိ ချုံပုတ်အတွင်း မိုင်းတလုံး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားကာ မြေပြင်၌တပေပတ်လည် အနက်ခြောက်လက်မခန့် ကျင်းတကျင်း ဖြစ်သွားကြောင်း ပါရှိသည်။ထို့ပြင်
ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့် တပ်ကုန်းရပ်ကွက် အင်ဂျန်ဒုံ(မြောက်) နယ်မြေ ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းနှင့် စက်မှု လမ်းဆုံအနီး ဆီးပင် တပင်အောက်၌ မိုင်းတလုံး ထပ်မံပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဆီးကိုင်းအနည်းငယ် ပျက်စီးသွားပြီး အခြားထိခိုက်မှုမရှိဟု သတင်စာကဆိုသည်။ထို့အတူ ည ၈ နာရီ ၅ မိနစ်ခန့်တွင် ဧရာရပ်ကွက် အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးဘေး လမ်းမီးတိုင်တတိုင်အနီး မသင်္ကာ ဖွယ် အထုပ်တထုပ် တွေ့ရှိသည့် သတင်းကြောင့် သွားရောက်စစ်ဆေးရာ “ည ၉နာရီခွဲအချိန် ပေါက်ကွဲရန် ချိန်ကိုက်ထားသော ဒေသန္တရလုပ် ချိန်ကိုက်မိုင်းတလုံးကို TNT ယမ်းထည့်ထားသည့် အချင်း သုံးလက်မ၊ အမြင့်နှစ်လက်မခန့်ရှိ ပလတ်စတစ်ဘူးတဘူး တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ဖောက်ခွဲရှင်းလင်းခဲ့သည်။” ဟုလည်း ရေးသား ထားသည်။
11/14/2011 07:26:00 PM
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့ အဆိုအမိန့်များနဲ့ "အနာဂတ်သစ် ဂျာနယ်''
''သိပ်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲနေရင် မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ကျွန်မနားလည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့...ဒီလိုကိစ္စတွေက သိပ်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုကလဲ ယုံကြည်မှုတွေနည်းသွားတက်တယ်။ပြည်သူကနေပြီးတော့ .. လက်ဆုပ်လက်ကိုင် .. သြော် ဒါကတော့တိုးတက်မှုတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့ မြင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေဟာ အမြန်ဆုံးရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ .. ကျွန် လက်ခံပါတယ်။'' 72674085-New-Future-Nov
11/14/2011 07:25:00 PM
၁၄-၁၁-၂၀၁၁ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီတွင် N.L.D. ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်/သံ)
၁၄-၁၁-၂၀၁၁ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီတွင် N.L.D. ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွငိ ပြည်တွငိးပြည်ပသတင်းစာဆရာကြီးများ၏ မေးခွန်းများကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ
11/14/2011 06:12:00 PM
တရားရေးမဏ္ဍိုင်သည် အဓိကဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
သန့်ရှင်းပြီး လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်မရှိလျှင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး
ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီအဆောက်အအုံများ ခိုင်မာရန် လွတ်လပ်ပြီး သန့်ရှင်းသည့် တရားရေးမဏ္ဍိုင်သည် အဓိကဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ၁/၂၀၁၁ တွင် ၄င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
''ကျွန်မတို့ နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် လူတွေဟာ စိတ်လုံခြုံဖို့ဆိုရင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ရှိရမယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ ဘာပေါ်မှာ မူတည်လည်းဆိုတော့ လွတ်လပ်တဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ရှိရမယ်။ တရားရေးမဏ္ဍိုင်က လွတ်လပ်ရမယ်။ သန့်ရှင်းရမယ်။ ဒီလိုသန့်ရှင်းပြီး လွတ်လပ်တဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင် မရှိလို့ကတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့
ကိစ္စလို့ ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီမိုကရေစီအတွက် မရှိမဖြစ် ရှိရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အဆောက်အအုံတွေ ခိုင်မာဖို့ဆိုတာဟာ လွတ်လပ်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ဟာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီဟာအတွက် ကျွန်မတို့ဟာ ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားသွားပါမယ်'' ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Eleven Media Group မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ''အန်တီပြောသွားတဲ့အထဲမှာ လွတ်လပ်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်အတွက် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဒါဆိုလက်ရှိ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ဟာ လွတ်လပ်သန့် ရှင်းမှုမရှိဟု သဘောယူဆပါသလား'' ဟူ၍မေးမြန်းခဲ့ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ''အဲဒီလိုပဲ ယူဆရမှာပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ဒါအများသိနေတဲ့ကိစ္စပဲလေ။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တော်တော်များများဟာလည်း အကျဉ်းထောင်ထဲ ရောက်သွားတာဟာ လွတ်လပ်ပြီးတော့ တရားမျှတပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့တရားရေး မဏ္ဍိုင်မရှိလို့ပါ'' ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်
11/14/2011 06:09:00 PM